Ka dib markii la soo sheegey 238 dhimasho sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19, gobolka Iowa la | KWIT
Somali News 12.18.2020
Gobolka ayaa ku soo warramey 701 qof cisbitaalada jimcihii iyo 96 bukaan ah oo qaba COVID-19 oo la dhigey 24-kii saac ee la soo dhaafey, labada lambarba way ka hooseeyaan kaliya usbuuc ka hor. Deegaanka, waxaa jira 60 bukaan oo ku kala yaal labada isbitaal ee Magaalada Sioux. Dhakhtar sare oo ka tirsan waaxda gurmadka ee UnityPoint-St. Luke’s ayaa sheegay in dadweynuhu u baahan yihiin inay laba jibaaraan raacitaanka shuruudaha amniga si loo yareeyo faafitaanka cudurka.
Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay soo saartay warbixin todobaadle ah oo ku saabsan kiisaska COVID-19 waxayna markii ugu horaysay sidoo kale liis garaysay ardayda iyo shaqaalaha kaarantada.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Warbixintu waxay muujisay afar arday iyo lix shaqaale ah oo laga helay fayraska.
Hal fasal oo fasallo badan ah oo ku yaal Woqooyiga Dhexe ayaa la galiyay Barashada Waxqabadka Degdegga ah.
Habeenimadii Isniinta, gudiga iskuulada bulshada ee magaalada Sioux waxay u codeeyeen in degmadu ka dalbato inay sii deyso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan maqnaanshaha. Xubnaha guddiga qaarkood waxay ka walaacsan yihiin in degmadu ay ka warbixineyso saameynta COVID-19 ee dugsiyada.
Warbixinta ayaa muujisay shalay inay jireen wadar ahaan 31 arday oo COVID-positive ah oo in ka badan 500 karantiil ah. Taasi waa 3% ardayda. Waxaa jiray in kabadan 400 arday sababo kale awgood. Waxaa jiray 16 shaqaale wanaagsan oo la soo sheegay shalay iyadoo kaliya karantiil la hayo 7 kaliya.
Magaalada Sioux City ayaa ku dhawaaqday buurta tubada Cone Park iyo barafka barafka ayaa furmi doona Arbacada soo socota, 23-ka Diseembar.
Waxaa jiri doona awood xadidan sababo la xiriira Cudurka faafa ee COVID-19 sidaa darteed waxay kula talinayaan dadka inay tikidhada horay u sii iibsadaan si loo xadido khadadka baarkinka.
Maaskarada ayaa loo baahan yahay marwalba, gudaha iyo dibaddaba. Waxaa jira dhowr ka reeban.